रोचक Archives - Page2of7- DerbyKhabar
फेसबुकको माध्यमबाट बिबाहित समलिंगी जिडी बुहारी बनेपछि किन रुदै मिडियामा आइन्- भिडियो सहित
काठमाडौँ १५ असार ।। सामान्य अर्थमा बिवाह एक जरुरी र परम्परा पनि हो । तर समलिंगी को पनि बिवाह को कुरा बेग्लै छ यहाँ यस्तै भएको छ एक जोडी काठमाडौँ घर भएका अनुभव दर्जी र झापा घर भएका रुपक गिरि बीच लामो समय सम्म गहिरो प्रेममा परेका थिए ।
June 30, 2019 —	0 comments —
हामी नेपाली कति बर्ष बाँच्छौ ? कसरी लामो आयु पाउने ?
हामी बाँच्ने सरदर उमेर हो ७० बर्ष । यत्तिका उमेरसम्म हामी कति तन्दुरस्त रहन्छौ ? कति निरोगी रहन्छौ ? कित उर्जावान रहन्छौ ? कति सिर्जनसिल रहन्छौ ? कति गतिशिल रहन्छौ ? एकैछिन उमेरको हिसाब-किताब गरौ । हामी १० बर्षसम्म बालक रहन्छौं । १३ बर्षदेखि किशोरवयमा प्रवेश गर्छौ । किशोरवय जीवनकै स्वणिर्म उमेर मानिन्छ । यतिबेला न शरीरमा रोग हुन्छ, न[Read More…]
June 29, 2019 —	0 comments —
सफल मानिस र राम्रो नेता बन्न तपाई संग यी ४ कुरा चाहिन्छ- भिडियो सहित
हरेक मानिस सफल हुन चाहान्छ तर सफलताको राज (सुत्र) थोरै मानिसलाई मात्र थाहा हुन्छ । वास्तवमै सफलता कसरी हासिल गर्ने ? सफलताको फर्मुला के हो ? चाणक्य नीतिको ११ अध्यायको पहिलो श्लोकमा मानिसको चार गुणको बारेमा बताइएको छ । ती गुण हुने मानिस सफल मानिस र राम्रो नेता बन्न सक्ने बताइएको छ । यी गुणहरु पछि सिक्ने कुरा होइनन्, केही[Read More…]
June 28, 2019 —	0 comments —
गौतम बुद्धलाई एक महिलाले घरमा बोलाएपछि बुद्धले यस्तो भने, जसले सबै पुरुषको शीर झुक्यो !
सिद्धार्थ गौतम बुद्ध र उनले प्राप्त गरेको ज्ञानका अनुयायी विश्वभर छन् । विश्वले शान्तिका अग्रदूत मान्ने गौतम बुद्धसँग जोडिएका कैयन यस्ता प्रसंग छन्, जसको चर्चा सर्वत्र हुने गर्दछ । यस्तै एक प्रसंग यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । जसले तपाईंलाई एउटा यथार्थ जानकारी गराउँछ, अतुल्य ज्ञान दिन्छ । सिद्धार्थ गौतम राजशी शाक्य खानदान छोडेर पहेँलो बस्त्र धारण गरी ज्ञान प्राप्ती र[Read More…]
एक्कासी धनीहुदा मानिसले गर्ने १४ कुरा जुन पढ्दा अचम्म पर्नुहुनेछ !तपाई के गर्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस
काठमाडौं । एक्कासी धनी भएपछि के गर्नुहुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने हरेक मानिसले यो गर्छु, त्यो गर्छु भनिहाल्छन् । अचानक धनी भएका मानिसको अनुभवबाट प्रायः हरेक मानिसले अनौठा काम गर्ने देखिएको छ । तपाई पनि यिनै काम गर्छु भन्नुहुन्छ होला, होइन त ? १. मानिसले धनी हुने बित्तिकै गरिरहेको कामलाई चटक्कै छोडिदिन्छन् । काम छोडेपछि समयमा अफिस जान पनि परेन[Read More…]
आज जुन २१ तारिख शुक्रबार यो वर्षकै लामो दिन १४ घण्टाको दिन
काठमाडौं ६ गते शुक्रबार ।। आज जुन २१ तारिख शुक्रबार यो वर्षकै लामो दिन हुन्छ । आजको दिन झण्डै १४ घण्टाको हुनेछ । आजबाट औपचारिक रुपले मनसुन सुरु भएको मानिन्छ । आजको दिन पृथ्वीको दक्षिणी गोलाद्र्धमा दिन छोटो र उत्तरी गोलार्द्धमा दिन लामो हुने गर्छ। आजबाट दिन सानो र रातलामो हुँदै जान्छ । आज विहान ५ बजेर ९ मिनेटमा उदाएको[Read More…]
सुतेको समयमा बिरालो देख्नुको अर्थ के हो ? गोबरले पोतेको कार
हरेकले सुतेको समयमा सपना देख्छन् । हरेक सपनाको अर्थ र त्यसको फल हुने धार्मिक मान्यता रहेको छ । सपना दुई खालका हुन्छन् । पहिलो हामी गहिरो निन्द्रामा भएको बेलामा देख्छौं र अर्को हामी आफ्नो राम्रो भविष्यका लागि सोच्छौं । सपना त्यो हो जो वास्तविक होइन तर एक सोच हो जो हामी चाहन्छौं कि भविष्यमा हामीलाई त्यस्तो चिज प्राप्त होस् ।[Read More…]
बिहीबार कुन भगवानको व्रत बसे लाभ मिल्छ ? भाग्यमानीले मात्र देख्ने नग ,जसले तपाइको भाग्य चम्काउछ
धार्मिक ।। हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले बिहीबार गुरु बृहस्पति तथा भगवान श्री हरि विष्णुको पूजा–आराधना गर्ने गर्दछन् । आजको दिन व्रत बस्नाले धन, पुत्र तथा विद्या प्राप्ति हुनेछ । यो दिन पहेलो रंगको कपडा लगाउने र पहेलै वस्तुको दान गरेमा शौभाग्य मिल्ने विश्वास छ । साथै, यो दिन विष्णुकी पत्नी लक्ष्मीको पनि पूजा गरिन्छ । यो व्रत शुक्ल पक्षको पहिलो बिहीबारबाट सुरु[Read More…]
आफ्नु सन्तानको रुपमा कसले जन्म लिन आउँछ ? जन्नुहोस ५ रोचक तथ्य
आफ्नु सन्तानको रुपमा कसले जन्म लिन आउँछ ? जन्नुहोस ५ रोचक तथ्य सन्तानको रुपमा कोहि हाम्रै पूर्वजन्मको ‘सम्बन्धी’ नै आयेर जन्म लिन्छ्न। जसलाई शास्त्रमा चार प्रकारको बताएको छ– १ = ऋण पुत्र पूर्व जन्मको कुनै यस्तो जीव जसबाट हजुरले ऋण लिएको होस् या उसको धन कुनै प्रकारले नष्ट गरिदिएको होस , त्यो हजुरको घरमा सन्तान बनेर जन्म लिन्छ अनि हजुरको[Read More…]
सपनामा सर्प देख्नुभयो ? चकित हुने ६ कुराको लक्षण सबैले जनै पर्ने !
एजेन्सी । हामीले सपनामा के देख्न सक्ने कसैको नियन्त्रणमा छैन । सपना एउटा यस्तो सत्य हो जुन सबैका लागि सामान्य छ र हरेक व्यक्तिले जीवनमा कहिलेकाहीं सपना अवश्य देख्छ । आज हामी कुरा गर्दैछौं सर्पको सपनाको बारेमा । हो, सपनामा सर्प देखेर डराउनु सामान्य छ । यसलाई लिएर हाम्रो समाजमा थुप्रै प्रकारका विश्वासहरू छन् । धार्मिक ग्रंथहरूमा, सर्पको सपना लिएर[Read More…]